Somaliya oo la wareegeysa hoggaanka howlgalka AMISOM | Baydhabo Online
Somaliya oo la wareegeysa hoggaanka howlgalka AMISOM
Waddamada Mareykanka,UK,Holland, Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobey ayaa magaalada Adis ababa ee xarunta Dalka Itoobiya ka furay tababar ciidan,kaas oo lagu tababaro ciidamo ka socda Waddamada ku jira AMISOM iyo Ciidan Soomaali ah.
Ujeedada tababarkan ayaa lagu sheegay in uu yahay sidii looga adkaan lahaa Al-shabaab islamarkaana dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya loogu wareejin lahaa amnigeeda.
Jon A Jensen oo ah Taliye ku xigeenka Ciidanka Mareykanka ee Afrika oo madasha ka hadlayay ayaa sheegay in Ciidamo ka socda Waddamada Uganda,Kenya ,Itoobiya,Jabuuti iyo Soomaaliyaba lagu tababarayo Adis ababa islamarkaana loo diyaarinayo dagaalka AL-shabaab.
Sidoo kale Korneel Elias Seyoum oo ah sarkaal Itoobiyaan ah ayaa madasha ka sheegay in qorsha AMISOM uga baxeyso Soomaaliya in uu yahay mid dheer sidaas darteedna loo baahan yahay in si nabad gelyo ah Soomaaliya ula wareegto hoggaanka howlgelinta AMISOM marka la gaaro 2020ka.
Waxaa uu sheegay in Awoodda Al-shabaab la dhimay 40%,sidaas darteedna ay wali jirto qatar Al-shabaab ka iman karta oo kaliya aan ku wajahneyn Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa in ay la wareegto hoggaanka howlgalka AMISOM ka hor inta aysan Ciidamada AMISOM ka bixin Soomaaliya.
AMISOM,waxaa hadda ka jooga Soomaaliya 22,000 oo Askari kuwaas oo muddo 10 Sano ah dagaal kula jira Al-shabaab.